10 संसारमा सर्वश्रेष्ठ डाइभि S साइटहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा आइसल्याण्ड > 10 संसारमा सर्वश्रेष्ठ डाइभि S साइटहरू
महासागरहरूको गहिराईमा, सभ्यताबाट टाढा लुकेको, र समय द्वारा अछुत, हो पनि 10 संसारमा सबै भन्दा राम्रो डाइभि sites साइटहरू. रंगीन र चहकिलो कोरल रीफ्स देखि WWII पोत wrecks, जंगली समुद्री जीवन, र निलो प्वालहरू, तपाईंको डाइविंग गियर तयार गर्नुहोस् किनकि यो डाइविंग सत्र अझै रोमाञ्चकको बारेमा छ.
1. चीनमा सर्वश्रेष्ठ डाइभि Site साइट: महान पर्खाल
10 मिलियन पर्यटकहरू हरेक वर्ष चीनको महान पर्खालमा यात्रा गर्छन्, तर धेरैलाई थाहा छ कि उनीहरू स्कुबा डुबाउन सक्छन् संसारमा सबैभन्दा प्रतिष्ठित साइटहरू मध्ये एकमा. अधिकांश व्यक्ति २१o00 किलोमिटर भित्तामा हिंड्छन्, सामाजिक मिडिया को लागी तस्वीरहरु, Panjiakou जलाशय एक पानी अन्तर्गत डाइविंग साइट हो. चीनको महान पर्खाल विश्वको एक मात्र आश्चर्य हो, तपाईं वास्तवमा डुबुल्की मार्न सक्नुहुन्छ.
यो इन्डोनेशिया वा फिजीमा डाइभि as जस्तो आकर्षक र सुन्दर नहुन सक्छ, तर तपाइँ चीनको महान पर्खाल को दृश्य द्वारा फिर्ता लिनु हुनेछ. केवल माथिबाट वरिपरिको प्रशंसा गरिरहेको छैन, तर सुरूदेखि नै पत्ता लगाउँदै, ईंटहरू र माथिबाट, हजारौं बर्ष सम्म स्थिर संरचना, प्रकृति खतराबाट बच्न, राजवंशहरु, र राजनीतिक परिवर्तनहरू.
डाइभ गर्न उत्तम समय:
उन्नत गोताखोरहरूको लागि पनि चीनमा ठूलो पर्खाल डाइभिंग एक चुनौतीपूर्ण अनुभव हो. कारण कम तापक्रम हो, को अधिकतम पुग्न 10 ११ डिग्री सेल्सियस, मा7गर्मी मा मीटर गहिरो. त्यसैले, महान पर्खालमा डाइभिंगको लागि उत्तम समय केवल जब तपाईं राम्ररी तयारी गर्नुहुन्छ. एक अतिरिक्त आवश्यकता छ को एक पूरा न्यूनतम 100 गर्न 200 मनोरञ्जनात्मक गोताखोरहरूको लागि डाइभ्स.
2. बेलायतमा सर्वश्रेष्ठ डाइभि Site साइट: वेल्स
गुफाहरू संग, 500 बिग्रन्छ, र शानदार समुद्री जीवन, वेल्स को समुद्री किनार डाइभिंग को लागी एक अद्भुत स्थान हो. यहाँ तपाईं स्कोमरको पानीमा m०m भन्दा बढीमा डुबुल्की मार्न सक्नुहुन्छ, र स्कोखोलम, र मिडिलहोलम टापुहरू. दृश्यता क्षेत्र मा एक उत्तम हो, तपाईंलाई सुन्दर समुद्री जीवनको प्रशंसा गर्न र WWII रेकर्स पत्ता लगाउन यदि तपाईं इतिहासमा हुनुहुन्छ भने.
निद्रा लागेको धारणाको बावजुद यो छ, वेल्स वास्तवमा युरोप मा एक शानदार डाइभिंग स्थान हो. उदाहरणका लागि, पेम्ब्रोकशायरमा स्कोमर मरीन रिजर्व वेल्सको सर्वश्रेष्ठ डाइभि sites साइटहरू मध्ये एक हो: क्याटफिस, डल्फिन, समुद्री स्लग र समुद्री घोडा, तपाईले भेट्ने समुद्रका केहि जीवहरू हुन्.
संग 20 विभिन्न डाइभिंग स्पटहरू, Portofinoaभन्दा बढी छ यूरोप मा आकर्षक समुद्री तट. आकर्षक टाउनहाउसहरूको अतिरिक्त, रेस्टुरेन्ट, र समुद्र तट, लिगुरियन तट यूरोप मा एक शानदार डाइभि site साइट हो.
पहिले, पोर्टोफिनो समुद्री रिजर्भले शुरुआत र उन्नत गोताखोरहरूको लागि अद्भुत रीफहरू र मलहम प्रदान गर्दछ. दोश्रो, ख्रीष्टको मूर्ति, अगाध खाडलको क्रिष्ट शीर्षमा एक हो5Portofino मा डाइभि sites साइटहरू. पछिल्लो, तर कम से कम, क्यानाडाली MOHAWK हिरण मलबे मा एक अर्को डाइभिiving आकर्षण हो 20-40 मीटर.
निष्कर्षमा पुग्न गर्न, Portofino डाइभि sites साइटहरु तपाइँको पहिलो डाइवि for को लागी आदर्श हो, र अर्को आश्चर्यजनक पत्ता लगाउन प्राकृतिक आश्चर्य यदि तपाईं एक अनुभवी गोताखोर हुनुहुन्छ.
एक ट्रेन संग पोर्टोफिनो गर्न मिलान
भेनिस एक ट्रेन संग Portofino गर्न
फ्लोरन्स एक ट्रेन संग Portofino गर्न
ट्रेनको साथ पोर्टोफिनोमा टुरिन
4. फ्रान्स मा सर्वश्रेष्ठ डाइविंग साइट: फ्रेन्च ग्वाडेलूप टापुहरू
क्यारिबियन स्वर्गमा, ला गुआडालूप टापुहरू फ्रान्सेली डाइभिंग स्वर्गको सानो टुक्रा हो. यस टापुको सानो समूहमा ला ग्रान्डे टेरे पर्छ, र पेटिट टेरे, ज्वालामुखीको घर, वर्षा वन, सुन्दर परिदृश्य र समुद्र तटहरू, र सब भन्दा महत्त्वपूर्ण यूरोप मा सबै भन्दा राम्रो डाइभि sites साइटहरू मध्ये एक.
ग्वाडेलूप टापुहरू बाली वा बेलिजको रूपमा लोकप्रिय छैनन्, तर यहाँ समुद्री जीवन पक्कै तपाइँ आफ्नो सम्पूर्ण छुट्टी को लागी पानीमुनि राख्नु हुनेछ. कुस्टेउ मरीन रिजर्व गुआदेलूपको सर्वश्रेष्ठ डाइभि site साइट हो, अद्भुत जीव र वनस्पति सहित, सुरुङको, गुफाहरू कछुए, र साहसी गोताखोरका लागि धेरै धेरै लुकेका स्पटहरू, र पहिलो पटकको लागि जुन केवल क्यारिबियन पानीमा समुद्री जीवनको आनन्द लिन चाहन्छन्.
ग्वाडेलूप टापुहरूमा डुब्ने उत्तम समय:
पानीको तापमान २ad-२8 डिग्री सेल्सियस वर्षभर गुआदेलूपमा रहन्छ, ताकि तपाईं डाइभि come आउन सक्नुहुन्छ जब तपाईं चाहानुहुन्छ.
5. ओर्कने टापु, स्कटल्याण्ड
हरियो घासका मैदानहरूमा, पहाडहरू, र पहाड, ओर्क्नी टापु संसारमा सबै भन्दा राम्रो समुद्री इतिहास छ. शाब्दिक, छन्7स्कटल्याण्ड मा Orkney पानी को तल मा जहाजहरु. जर्मन समुदायको समुद्री फ्लीटबाट स्क्यापा फ्लोमा यी कामहरू, मा 1919.
मलबे साथै, स्पष्ट पानीमा अन्वेषण गर्न त्यहाँ अचम्मको समुद्री वन्यजीव छ. उदाहरण को रुपमा, चर्चिल ब्यारियर र येस्नाबी वा इनगनेसको पानी जंगली समुद्री जीवनको लागि उपयुक्त छ.
ओर्क्नी टापुहरूमा डुब्ने उत्तम समय:
नोभेम्बरमा इस्टर, जब तापमान १° डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ.
6. युरोपमा सर्वश्रेष्ठ डाइभि S साइटहरू: सिल्फ्रा, आइसल्याण्ड
दुई महाद्वीप बीच, को हृदय मा Thingvellir राष्ट्रीय पार्क, आइसल्याण्ड मा स्पष्ट पानी तपाईं एक आश्चर्यजनक डाइविंग अनुभव को लागी पर्खिरहेको छ. सिल्फ्रामा अनुपम भूवैज्ञानिक सुविधाहरूले अनुभवी गोताखोरहरूको लागि रहस्यमय सुरुnelहरू र काभर्नहरू प्रस्ताव गर्दछ.
सिल्फ्रामा डाइभिंगको बारेमा सबै भन्दा रमाईलो चीज भनेको फिसार हो. यो डाइवि path मार्ग वार्षिक द्वारा गठन गरिएको थियो2उत्तर अमेरिकी र युरेसियन टेक्टोनिक प्लेटहरूको सेमी हलचल. यो पहिलो भूकम्प पछि सिर्जना गरिएको थियो, तर यी दिनमा डाइभिंगका लागि पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ, त्यसोभए तपाईं आइसल्यान्डिक पानीमा अविस्मरणीय डाइभि experience अनुभवको लागि तयारी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ.
सिल्फ्रामा अधिकतम डाइभि depth गहराई अनुमति छ 18 मीटर.
7. संसारमा सर्वश्रेष्ठ डाइभि S साइटहरू: बाली
वरिपरि बलौटे तटहरू, मन्दिर, ज्वालामुखी पहाड, जादुई बालीको पानी आफ्नै लागि विश्व आश्चर्य हो. निस्सन्देह, बाली छुट्टीको लागि रमाईलोको लागि उत्तम गन्तव्य हो.
बालीमा, तपाईको समय धेरै डाइभिंग स्थानहरूको बीचमा विभाजित गर्न सक्नुहुन्छ किनकि तिनीहरू जताततै छन्. रंगीन कोरल रीफ्स देखि विशाल माछा, र दिमागमा उड्ने बुद्ध मूर्तिको गुफाहरू, बाली अन्डरवाटर डाइभिंगको लागि रमाईलो र दर्शनीय संसार हो स्नोरकलिंग.
बालीमा गोता हाल्ने उत्तम समय:
मेदेखि नोभेम्बर बालीमा डाइभिंग मौसम हो, र मन्त रेहरू हेर्न उत्तम समय अप्रिलदेखि मे हो.
8. संसारमा सर्वश्रेष्ठ डाइभि S साइटहरू: बेलिजमा निलो प्वाल
125 गहिरो मीटर, आकारमा गोलाकार, र एक शानदार हवाई दृश्य संग, बेलिजमा नीलो होल डाइभि site साइट, शीर्ष को छ 10 संसारमा डाइभि sites साइटहरू हुनुपर्दछ. यो विशाल प्वाल बिलीजको लाइटहाउस रीफको ठीक छेउमा छ, र राम्रो दृश्यतामा, तपाईंले आफैंलाई बिर्सिन नसक्ने डाइभि adventure साहसिकमा पाउन सक्नुहुन्छ.
हाम्रो सूचीमा अन्य उत्तम डाइभि sites साइटहरू जस्तो छैन, निलो होल बालिनी मूर्तिकलाहरूको घर छैन, दुर्लभ समुद्री जीवन, वा रंगीन चट्टानहरू. तपाईंले के पाउनुभयो एउटा चुनौतीपूर्ण र सन्तोषजनक डाइभि experience अनुभव हो, यसले तपाईंलाई अर्को डिभ्यामास्टर स्तरमा लैजान्छ.
नीलो प्वालमा डुब्नको लागि उत्तम समय:
अप्रिलदेखि जून व्हेल शार्क हेर्ने र डाइभिivingको लागि उत्तम हो.
9. राजा आम्पाट |: संसारको अन्त्यमा डाइभिंग
सभ्यता देखि माथि सम्म राखिएको छ 2004, राजा अम्पाट लुकेको स्वर्ग हो, इन्डोनेशिया र अष्ट्रेलिया बीच स्थित. यस ढिलाइ खोजलाई धन्यवाद, राजा आमपाटमा समुद्री वन्यजन्तु संसारको वन्यजन्तुहरू मध्ये एक हो.
जब तपाईं राजा Ampat मा डुबकी, तपाईले पत्ता लगाउनु हुन्छ 600 एक्लै हार्ड कोरलको प्रजाति, रंगीन र यस संसारको समुद्री जीवनको बाहेक. यो अद्वितीय संसारको बीचमा छ4मुख्य टापुहरू: Waigei, बान्ता, सलावति, र मिसूल दुर्गम पश्चिम पापुआमा.
यदि तपाईं उन्नत डाइभरमा मध्यवर्ती हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाई निश्चित रूपमा तपाईको अर्को डाइभिiving बिदा राजा आमपाटमा बुक गर्नु पर्छ.
राजे एम्पाटमा डुब्ने उत्तम समय:
नोभेम्बर देखि अप्रिल सम्म तापमान संगै 27 गर्न 30 । C.
10. चीनमा सर्वश्रेष्ठ डाइभि S साइटहरू: कियान्दाव तालमा शि चेng प्राचीन शहर
हजार टापु तालमा गहिरो, झेजियांग प्रान्तमा, को पुरानो शहर Shi Cheng झूटा को. को गहिराईमा 40 मीटर, हराएको चिनियाँ शहरको चमत्कार तपाईले पत्ता लगाउनु हुन्छ. भयंकर पानी र समय बित्यो बावजुद, शहरको वास्तु सुविधाहरू, र काठका विवरणहरू राम्रोसँग सुरक्षित छन्.
यी कारणहरूले, शि चेंng शहर गोताखोरहरूको लागि लुकेको स्वर्ग हो. धेरैजना कियान्दाओ तालको सुन्दरता पत्ता लगाउन आउँदछन्, तर यो हराएको शहर को यात्रा को एक और आश्चर्यजनक कारण हो. शहर र उपत्यकामा बाढी आएको थियो 1959, तर यो डाइभि for को लागी पूर्ण सुरक्षित छ.
शि चेंngमा डुब्नका लागि उत्तम समय:
खस्नु, सुख्खा र न्यानो मौसम को लागी धन्यवाद.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईंलाई एउटा अविस्मरणीय यात्राको योजना बनाउन सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं 10 ट्रेन द्वारा संसारमा सर्वश्रेष्ठ डाइभिiving साइटहरू.
के तपाईं हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "विश्वमा १o बेस्ट डाइभिंग साइटहरू" तपाईको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fne%2Fbest-diving-sites-world%2F- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)